Dabley hubeysan oo 28 qof ku dilay bas u safrayey Nairobi – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Dabley hubeysan oo 28 qof ku dilay bas u safrayey Nairobi * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame on 22nd November 2014
Mareeg.com: Dabley hubeysan ayaa dad la socday gaari rabaab ah ku laayey deegaan ka tirsan gobolka Woqoyi Bari Kenya, sidaas waxaa xaqiijiyey booliska dalka Kenya.
Booliska ayaa sheegay in gaari bas ah oo siday 60 rakaab ah, kana baxay magaalada Mandera, kuna sii jeeday Nairobi ay afduubteen dabley hubeysan, islamarkaana dileen 28 qof oo la sheegay ineysan Muslim aheyn.
Sida ay sheegayaan wararka baskan ayaa la sheegay in laga leexiyay wadada, kadibna la geeyay Tuulo lagu magacaabo Carabiya oo 35 KM u jirta Mandheera, halkaasoo 28 ka mid ah dadkii saarnaa lagud dilay.
Wararka ayaa sheegaya in kooxda dilka geysatay ay kala sooceen dadka Muslimka iyo dadka gaalada, taasoo qolada dilka fulisay u ekeysiineysa Alshabaab oo deegaanka horay dilal nuucaan ah uga geystay.
Alshabaab horay u sheegtay weeraro dad lagu laayeey oo tan iyo sanadkii 2011 ka dhacayey gudaha dalka Kenya.